Ny ranomasina kale dia onjam-peo mahavariana misy làlana roa miverimberina manakaiky antsika izay toa mifanaraka amintsika - rehefa mahasoa sy mahasalama ny famokarana fanafody dia azo jerena amin'ny vokatra mora sy mora, izay, sambatra, mbola betsaka eto amin'izao tontolo izao. Taorian'ireny dithyrambs ireny, tsy afaka nanohy ny lisitr'ireo sahan'asan'ny ranomasina izahay , saingy nanapa-kevitra izahay fa handresy lahatra anareo amin'ny farany fa mavesatra ny fihinanana azy.
Momba ny fomba mahatsara ny ranomasina
Kale ny ranomasina dia laminaria, algà, izay tsy heverina ho zavamaniry iray akory (fantatrao fa biby goavam-be ny alika). Ny ala brown dia zavatra be dia be any amin'ny morontsiraka, noho izany dia ireo mponin'ireo mpisava lalana izay mahasoa ny kaleo dia ny mponina amoron-dranomasina.
Ireo japoney malaza malaza, dia efa tena nanohina ny fitenenana, milaza momba ny niandohan'ny kelp. Rehefa ho faty ny hanoanana sy ny fahantrana ny vahoaka Japoney, dia niangavy an'ireo andriamanitra hiantsoantso ny mpitondra hendry Shan Guin. Ireo andriamanitra dia nanolotra azy tamin'ny fisotroana fahagagana, nanomezany faharetana, hery ary fahatahorana. Mba hanaparitahana ny zava-pisotro ho an'ny nosy Japon rehetra, dia nianjera nankany an-dranomasina ny zanakavavin'ny lehiben'ny governemanta. Ny andriamanitra dia nitodika tany amin'ny ala, izay nanangona ny toetra fanasitranana ny zava-pisotro. Noho izany, manodidina ny nosy, niparitaka haingana ny ala, izay namonjy ny vahoakan'i Japana tamin'ny faran'ilay loza.
Inona no mahasoa any an-dranomasina?
Andeha atombohy amin'ny fananganana. Laminaria 59% dia mifototra amin'ny polysaccharide, izany hoe, tsiranoka. Ao amin'ny proteins faharoa amin'ny 13%, ny voan-dranomamy dia malaza noho ny haavony fibre-nify - tsy voapoizina ny fibraina fitaratra - 11%, manana saline mineraly sy fahamendrehana.
Raha ny saline mineraly dia misy zavatra tokony hireharehana. Ny kaleo no maka toerana voalohany noho ny fisian'ny iodine sy ny sodium, ary koa ny votoatiny avo lenta, potasioma ary magnesium.
vitamina A, B1, B12, C, D, E.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny kaleon'ny ranomasina dia vitamina-mineraly, ahitana mihoatra ny 40, tena tsara ho an'ny vatantsika.
Andeha isika hihazakazaka amin'ny alàlan'ny fanovàna ny vokatry ny kelpa eo amin'ny vatan'olombelona:
manatsara ny metabolism;
mahatonga ny fakan'ny volo ho matanjaka kokoa (ny kelp dia tendrena ho ampidirina amin'ny biby fiompy ao anaty sakafo, izay mampamirapiratra ny volony);
Noho ny siramamy polysaccharides dia manandratra ny hery fiarovan'ny vatana ary manakana ny fitomboan'ny tiboky;
manakana ny fivoaran'ny sclérose vascular;
Ny cholesterol dia tsy mijanona amin'ny lamba intsony noho ny laminaria;
Ny algée dia manakana ny fitomboan'ny fiterahana.
Sakafo ao anaty ranomasina
Mazava ho azy, ao amin'ny sakafo sakafo, ny karaoke dia tokony ho tonga farafaharatsiny, satria ho afaka hameno izany fihenam-bidy izany matetika amin'ny vitamina ao amin'ny vatana mihinana. Saingy tsy izany rehetra izany ...
Ny fanjavonan'ny kalesin-dranomasina miaraka amin'ny sakafo dia azo atao tsara, satria noho ny votoatin'ny fibre avo, ny kelp dia hanadio ny tsinay, ary noho ny firaiketan'ny yodine rakitra - dia mampihena ny metabolism.
Andeha hojerentsika ny ohatra iray amin'ny fampiasana kalesin-dranomasina ho an'ny sakafo:
Ny sakafo dia maharitra 7 andro;
Isan'andro isan'andro dia mihinana 300 g ny kelp (amin'ny endrika maina, mangatsiaka, mangatsiaka - mipoitra sy mivaivay mialoha);
300 g ny hazan-dranomasina - moustels, kirany, kiraro , orita, trondro, sns.
Tokony hozaraina amin'ny sakafo 5 io vola io;
aza mampiasa kafe eo ho eo, misotro dite maitso, espresso voajanahary ary, mazava ho azy, rano.
Noho izany, mandritra ny herinandro dia afaka mahazo tsaratsara kokoa ianao ary very eo amin'ny 5 kg ny lanjany.
Sakafon'ny olona - tsara sy ratsy
Ny vokatry ny fampiasana sira
Avy amin'iza avy no vokatra azo avy amin'ny vokatra?
Inona no ilaina amin'ny voan-tsinapy?
Vokatry ny buckwheat - tsara sy ratsy
Inona avy ireo vitamina ao anaty akoho?
Inona avy ireo vitamina ao anaty haizim-pito?
Ny lefona dia tsara sy ratsy
Andorra ho an'ny ankizy
Mpanarara amin'ny trano fiterahana
Ny karazana kôkômbiana tsara indrindra - inona no karazana mifidy ho an'ny tokantrano?
Tabilao ho an'ny gazebo
Sakafom-boankazo misy voankazo
Chris Pratt dia lasa mpiaro ny zatovo tanora Dan Pratt Memorial
Tombontsoa amin'ny fampinonoan-tena
Katsaka eo amin'ny molotry ny zaza vao teraka
Inona ny GHA amin'ny gynary?
Vokatra ho an'ny fitomboan'ny volo
Sweets ho an'ny ankizy
Salady an-dranomasina - sakafo mahasalama sy tsy mahazatra ny sakafo tsotsotra voalohany amin'ny fety
Ahoana raha tsy misy vola?
Ivan Rehn tamin'ny fahazazany
Vokatra ho an'ny reny mitaiza